ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई खाजा र चकलेट ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ट्राफिक नियम पालना नगर्नेलाई खाजा र चकलेट !
२० भाद्र २०७५, बुधबार ०७:३५
काठमाडौं-गाडी सानो होस् वा ठूलो चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), गाडीधनी पुर्जालगायत कागजपत्र साथमा राख्नुपर्ने नियम छ । गाडीको अवस्था चुस्त हुनुपर्छ । ट्राफिक नियम पालना गरी चलाउनुपर्छ । नियम पालना नगरे कारबाही भोग्नुपर्छ ।
‘थाहा पाएर पनि नियम पालना नगर्ने भनेको लापरबाही हो। जरिवाना नै काट्नुपर्ने हो। तर तपाईंहरूलाई लज्जाबोध होस भनेर चकलेट बाँडेका हौं,’ ट्राफिक प्रमुख गौतम चालकहरूलाई सम्झाउँदै थिए। गल्ती पनि गर्ने गुलियो खाजा पनि पाउने, यस्तो किन? इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका प्रमुख दयानिधि ज्ञवाली भने, ‘कहिले-काहीं मीठो तरिकाले पनि नियम सम्झाउँ भनेर हो नि। अरू बेला कारबाही नै हुन्छ।’, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकका पहिलो पृष्ठमा छ ।
सहसचिवहरुको सरूवा, को कहाँ पुगे ?
एपीएफको टोलीद्धारा अबैध काठ बरामद